हिरोसिमाको नरसंहार र आइन्सटाइनको आसु । | प्रेरक संसार
हिरोसिमाको नरसंहार र आइन्सटाइनको आसु ।
सोमबार ६ अगस्त, १९४५ । साढे तिन लाख जनसंख्या भएको शुन्दर जापानी शहर हिरोशिमा 'एनोला गे' नामक अमेरिकी बमवर्षक विमानले विहान ८.१५ बजे...
सोमबार ६ अगस्त, १९४५ ।
साढे तिन लाख जनसंख्या भएको शुन्दर जापानी शहर हिरोशिमा 'एनोला गे' नामक अमेरिकी बमवर्षक विमानले विहान ८.१५ बजे प्यारासुट फूत्त खसाल्यो । स्कूल जादै गरिरहेका नानीहरूले त्यो देखेर कराए- 'हेर, हेर प्याराशुट !!'
लाम्चो गोलो वस्तु सहित खासालिएको त्यो प्यारासुट मृत्यु बोकेर आएको कुरा कसलाई के थाहा ? त्यो संसारको पहिलो एटम बम 'लिटिल ब्वाइ' थियो जुन आकाशमै विस्फोट भएपछी हज्जारौ केटाकेटी व्यक्ति भष्म भए ।
एटम बम विस्फोट भएको क्षेत्र वरिपरि आँखानै अन्धो पार्ने नीला सेता बिजुलीका झिल्काहरू फैलिए । हज्जारौ जिउँदा मानिसहरू बमको अत्याधिक तापले गर्दा वाफ र धुँवामा फेरिए । कैयौ व्यक्तिहरू डढेका डल्ला र हाडखोरमा परिणत भए ।
ठिक त्यस्तै भयो- बिहिवार, अगस्त ९ को बिहान ११.०२ बजे अर्को जापानी शहर नागासाकीमा 'फ्याट म्यान' खसालिदा पनि ! उस्तै विस्फोट, उत्तिकै रेडियो विकिरण, उस्तै आगलागी र शहरको विनाश, उस्तै मृत्युको ताण्डव नृत्य र लाशै लाश भएका मानिसहरू !
हिरोशिमामा वम विस्फोटनको तीन मिनेटमै झण्डै एकलाखको मृत्यु भयो पछी सम्ममा तड्पी-तड्पी मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख चालिसहजार नाघ्यो । त्यस्तैगरी बम पहिलो दिनमै दुई लाख जनसंख्या भएको नागासाकीका चौरासी हजार मानिसहरू लाशमा परिणत भए । अनि त्यसपछीका वर्षहरूमा भएका मृत्युहरूको संख्या अनगिन्ती मात्रामा थपिदै गयो ।
रेडियो मार्फत यो खबर सुनेका आइन्स्टाइनले आखाँ भरी आशू बनाउदै भन्नुभएको थियो, -' उफ! कस्तो बिजोग ।' 'आणविक वा पारणाणुविक शक्तिको विकास गर्दैमा कसैलाई विज्ञानले अलौकिक शक्ति प्रदान गर्दैन ।'
आज अगस्त ६, २०१४, आज त्यो इतिहासको त्यो कलंकित दिन बितेको ६९ वर्ष पुगेछ । युद्धले कसैको हित गर्दैन तर पनि मानवजातीले अझै यद्धलाई छोड्न सकेको छैन, गाजामा जारी युद्धले यस्तै देखाइरहेको छ । मानव स्वाभाव शान्ती चाहन्छ, यसर्थ शस्त्र छोडौ, शास्त्रको बाटोमा आऔ ।
प्रेरक संसार: हिरोसिमाको नरसंहार र आइन्सटाइनको आसु ।